Evergreen Phyo: မြန်မာပြည်ခရီး - ၃ (ပုဂံ ညောင်ဦး)
တတိယနေ့ကျတော့ ကျွန်တော်တို့ကားမငှားဖြစ်တော့ဘဲ မြင်းလှည်းနဲ့ ကျန်တဲ့ဘုရားတွေဖူးဖို့ရာ မြင်းလှည်းနှစ်စီးငှားလိုက်ကြတယ်..။ မြင်းလှည်းဆိုလို့ အရင်တစ်ခေါက်ရောက်တုန်းက လိုက်ပို့ပေးဖူးတဲ့ မြင်းလှည်းဆရာကို သတိရတယ်... ဘုရားသမိုင်းလည်းနှံ့စပ်တယ်..စကားပြောကလည်းကောင်းဆိုတော့ မြင်းလှည်းနဲ့ဘုရားဖူးရတာ သိပ်ကိုအသက်ဝင်သွားတယ်...။ ဘုရားသမိုင်းအပြင် ဘယ်ဘုရားဘယ်နေရာမှာ ဘယ်ရုပ်ရှင်ကားဘယ်ကြော်ငြာ လာရိုက်သွားတာ ဆိုပြီးပြောပြတတ်သေးတယ်...။ မှတ်မိသလောက် မြင်းလှည်းနံပါတ် ၅၉ တဲ့..။ မရောက်သေးတဲ့ဘုရားတွေဖြစ်တဲ့ ရှင်အဇ္စဂေါဏဘုရား၊ ဘုရားသုံးဆူ၊ တရုတ်ပြေးဘုရား၊ လေးမျက်နှာဘုရား၊ ဆင်ဖြှူရှင်ဘုရားနဲ့ ပြသာဒ်ကြီးဘုရား တွေသွားဖူးဖြစ်တယ်...။ အဲဒီဘုရားတွေသွားတဲ့လမ်းက တော်တော်လေးသာယာတယ်... မြင်းလှည်းနဲ့ ဂေါက်ကွင်းသွားတဲ့လမ်းကလေးမှာ သိပ်ကိုလှတယ်..။ လမ်းလေးဝဲယာမှာ အပင်စိမ်းစိမ်းကလေးတွေ တစ်ပင်နဲ့တစ်ပင် ယှက်လို့... အဲဒီလမ်းလေးသိပ်သဘောကျတယ်...။ အရင်တစ်ခေါက်ရောက်တာ ညနေဘက် ....ခုတစ်ခေါက်ကတော့ မနက်ဘက်ပေါ့...။ အဲဒီကနေမှ နန်းမြင့်မျှော်စင်ဘက်ပတ်ပြီးတော့ ဆက်သွားရတယ်....နေလည်းသာနေတယ်....။
မြင်းလှည်နဲ့သွားရတာ ကားနဲ့သွားတာ မတူဘူး....ကားနဲ့ဆို ဘုရားတစ်ဆူနဲ့တစ်ဆူ ခဏလေးရောက်သွားရော..။ မြင်းလှည်းနဲ့မှ ဘုရားတစ်ဆူနဲ့တစ်ဆူ သွားရတဲ့အချိန်လေးတွေမှာ ပုဂံရဲ့အလှကိုငေးမောရတော့တယ်...။ ဘုရားတိုင်းမှာ အနီရောင်တောက်တောက်နဲ့အကောင်လေးတွေ တွေ့ရတယ်...ကျောပေါ်မှာလည်း ပန်းပွင့်လိုပုံစံမျိုးနဲ့.. တမာပိုးတွေလားမသိဘူး....။ မြင်းလှည်းဆရာကိုမေးကြည့်တော့ နတ်သမီးကွမ်းသွေးဆိုလား....။ ဘုရားသုံးဆူ
တရုတ်ပြေးဘုရားကတော့ အပေါ်တက်လို့ရတော့ ပုဂံလွင်ပြင်တစ်ခုလုံးကို အပေါ်စီးကနေမြင်ရတယ်...အစွန်းဘက်လည်းကျတော့ ဘုရားတော်တော်များများကို မြင်ရတယ်..။လူအများကတော့ ညနေဘက်မှလာကြတယ်.... ပုဂံနေ၀င်ချိန်ကိုကြည့်ရှဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့လေ......။ အရင်တစ်ခေါက်သွား ခဲ့တုန်းကညနေအချိန်... နွားကျောင်းသားနဲ့ နွားတစ်အုပ် ညနေခင်း အိပ်အပြန်ပေါ့ ...ဘုရားပေါ်ကနေမြင်ရတာ...သိပ်လှတယ်....။ နတ်သမီးကွမ်းသွေး
ပြသာဒ်ကြီး ဘုရားလည်းအပေါ်တက်လို့ရတယ်.... တရုတ်ပြေးဘုရားထက်အများကြီးကျယ်တယ်....။ အပေါ်ကနေ ဘုရားစုံမြင်ရတယ်......ရောက်တဲ့အချိန်ကသိပ်ပူနေပြီ.....အပေါ်မှာကြာကြာမနေတော့ဘဲ ပြန်ဆင်းခဲ့တယ်...။ ဘုရားကိုညဘက်မှာ လာကြတဲ့သူတွေများတယ်လို့ပြောတယ်....။ပြသာဒ်ကြီးဘုရား
နေ့လည်စာအတွက်တော့ ရွှေမြန်မာ ၂ မှာဘဲသွားစားခဲ့တယ်....။ အရံဟင်းလေးနည်းနည်းပြောင်းပြီး ဟင်းရည်လဲပြောင်းတယ်..။ ပဲနှပ်၊ ကြက်ဟင်းခါးသီးချက်၊ ရုံးပတေသီးနဲ့ ချဉ်ပေါင်ဟင်းရည်....ကျန်တာတွေကအတူတူဘဲ..။ ညနေကျတော့ ဟိုတယ်နားက ရွှေပြည်နန်းပြခန်းဆိုလား..အဲဒါဝင်ကြည့်ပြီး ညနေစာစားတယ်..။ ပြီးမှ ရွှေစည်းခုံဘုရား တစ်ခေါက်ထပ်သွားဖူးပြီး...ဟိုတယ်ကိုပြန် အထုပ်တွေသိမ်းရတယ်... နက်ဖြန်နံနက်စောစော မန္တလေးဆက်သွားရမယ်မဟုတ်ပါလား....။ Posted by
I wish I could be there. Thank you so much for sharing the pictures too.Mon Petit Avatar
အောင်မငှီး ပုဂံကိုသွားချင်နေတာ တစ်ပိုင်းသေလို့ .ဓါတ်ပုံတွေ တွေ့လိုက်ရတာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး. ရက်စက်လိုက်တာ
ပုဂံကိုရိုက်တဲ့ ရှုခင်းပုံလေးတွေက စူဠာမုဏိ နဲ့ သရပါ မှာ ပန်းချီကားချပ်လိုပဲ လှတယ်ဟုတ်တယ် မင်းနန်သူဖက်မြင်းလှည်းနဲ့သွားရတာ သဘောကျတယ်။ နောက်တခေါက်မှ ပြသာဒ်ကြီး ဘုရား သွားရမယ်။အော်...အစ်မဘလော့ဂ်ခဏလေးပိတ်ထားတယ်နော်
ပုဂံပုံတွေ မျှဝေပေးလို့ သဘောကျ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။့ုုပုပံကိုလည်း အရမ်းလွမ်းမိပါတယ်။အိုင်အိုရာ
နတ်သမီးကွမ်းသွေးကို တခါမှ မကြားဘူး မမြင်ဘူး လို့ သိပ်စိတ်ဝင်စားသွားပြီး သူငယ်ချင်း ပိုးမွှားပါရဂူ ကိုပုံပြပြီး မေးကြည့်တော့ Velvet Mite လို့ ပြောပါတယ်။ မွှား (Tick) အနွယ်ဝင်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာနံမည်လေး အရင်သိလိုက်ရလို့ ဝမ်းသာကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ http://en.wikipedia.org/wiki/Trombidiidae မှာရှာဖတ်ကြည့်မိပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ပုဂံပုံတွေ လွှတ်လှတယ် ညီရေ..၊ အထူးသဖြင့် မြင်းခေါင်းပါတဲ့ ပုံတွေမှာ ကြည့်သူက မြင်းလှည်းပေါ်မှာ ပါသလိုလိုနဲ့...၊း) ဟိုးအရင် တရုတ်ပြေးဘုရားမှာ ထိပ်ဆုံးက ကွမ်းတောင် ပြန်မဆောက်ခင်တုန်းက အပေါ်ဆုံးက flat ပဲ၊ အဲဒီမှာ ကျနော် Sunset ခဏခဏ သွားကြည့်ခဲ့တယ်၊ အခုတော့ တက်စရာနည်းသွားလို့ ပြဿဒ်ကြီးကို တခါတရံသွားတယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ တခေါက်မှာ တော့ ရွှေပြည်နန်းပြခန်း ရောက်ခဲ့တယ်၊ ပုဂံနဲ့ မအပ်စပ်တဲ့ နန်းမြင့်မျှော်စင်ပါတဲ့ တစ်ပုံကလွဲလို့ ပုံတွေအားလုံး ကြိုက်တယ်....။
မMPA.. ကျွန်တော်လဲ အခုတောင်ပြန်သွားချင်နေတယ်..။ MK.. ပုဂံကိုတော့ မြန်မာတိုင်းချစ်ကြတယ်..။ လာလည်လို့ ကျေးဇူး..။မစူး.. ကျွန်တော်လဲ အစ်မပြောတဲ့ပုံလေးတွေ ကြိုက်တယ်..။ ဖုန်းကင်မရာနဲ့ပဲ ရိုက်ထားတာ..မထင်ရဘဲ တော်တော်လေးပန်းချီဆန်တယ်..။ ကိုညီလင်းသစ်ဆီက ကင်မလာကြီးမငှားသွားလိုက်ရတာ နာထှာ..။ ;D ဘလော့ ပြန်ဖွင့်တာစောင့်နေမယ်နော..။ မအိုင်အိုရာ.. အစ်မက အကောင်လေးတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ထင်တယ်... ငှက်တွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာတော့ သိတယ်..။ Wiki မှာဖတ်ကြည့်တော့မှ နွေအကုန်မိုးရာသီမှာ အဲဒီအကောင်တွေထွက်လာတတ်တယ်တဲ့..ဟုတ်လည်းဟုတ်တယ်.. ကျွန်တော်သွားတဲ့အချိန် ကလည်းမေလကုန် ဇွန်လဆန်းထဲမှာဘဲ..။ Velvet Mite ဆိုသလိုဘဲ ကျောကုန်းက တကယ့်ကတ္တီပါလိုမျိုးလေး...ကိုင်တော့မကိုင်ကြည့်ခဲ့ဘူး..။ ပြောပြပေးတာ ကျေးဇူး...။ ကိုညီလင်းသစ်.. မြင်းခေါင်းကတော့ ဘယ်လိုမှ လွတ်အောင်ရိုက်လို့မရဘူး..လက်ကတုန်နေလို့... အမှန်ကိုပြောရရင်တော့ လိုက်ပို့ပေးတဲ့ မြင်းလေးကို credit ပေးချင်လို့ သူ့ကိုပါထည့်ရိုက်ထားတာပါ.. =P ။ နန်းမြင့်မျှော်စင်ကတော့ ဘုရားပေါ်ကနေ ပတ်ပတ်လည်ဓာတ်ပုံရိုက်တော့ ဒေါင်လိုက်ကြီး ကန့်လန့်ကန့်လန့်ပါသွားတယ်... =(
ကိုင်ကြည့်ရင်ခြေထောက်လေးတွေ အထဲကိုင်ဝင်ပြီး အလုံးလေးဖြစ်သွားတယ်အိမ်ကိုလွမ်းတယ် :(
လှလိုက်တာဗျာ သဲသောင်ပြင်ပေါ်က သစ်ပင်စိမ်းစိမ်းလေးတွေ ကြိုက်တယ် ။ညီဖြိုးရေ တက.ယ် အားကျတယ.်
အတော်လေးစုံစုံလင်လင်ရိုက်တာပဲ.....။ ရောက်ဖူးချင်လိုက်တာ...။ ခုတော့ ပုံတွေပဲ ကြည့်.... :((((((((((